Ku dhawaad ​​qarnigii 21-aad, magaalada Kadıköy-Kartal mitir ayaa ku dhow dhamaadka dhamaadka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMarka la gaaro dhammaadka qarniga 21., Kadikoy-Eagle Metro waxay soo gaadhay dhamaadka
01 / 08 / 2012 34 Istanbul, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, Metro, TURKEY
Waxay ka shaqeysaa Kadikoy - Kartal Metro Line, oo ah tareenka ugu horreeya ee dhinaca Anatolian Side, hadda waxay ku jiraan marxaladda kama dambaysta ah. Dhibaatada ugu weyn ee gaari ee ka jirta magaalada Istanbul, ayaa ugu mahadcelineysa metro in badanaa laga tirtiri doono.
Hawlgalkan tijaabada ah waxaa lagu soo gabagabeeyay Kadikoy - Kartal Metro kaas oo la dhisay celcelis ahaan maalin walbuu qaadi karo rakaabka 1 million. Khadka ayaa loo qorsheeyay inuu furo bisha soo socota.
Gawaarida, Mishiinada, Mashiinnada Ganacsiga ayaa meeshana dhigtay saldhigga. Socodka dadka naafada ah waxaa loo tixgeliyaa xarumo ku habboon. Dhab ahaan, cilladaha la qeexay waxaa fuliya daraasad qandho ah.
- Qaababka khadka -
Waxaa jira xarumo 22 oo ku yaal khadadka metro ee Kadikoy-Kartal, oo leh dherer ahaan qiyaasta 16. Diiwaangelinta tunnel tunnel ee mitirka 150 ayaa lagu qabtay magaalada, taas oo ah tunnelka ugu dhakhsaha badan adduunka.
Tirada gaadhiga wata ee loo fidiyay khadka ayaa ka kordhay 120 ilaa 144 (wadarta guud ee 36) iyadoo laynka loo fidiyey Kaynarca. Madaarka, wadarta wadayaasha 4 waxaa lagu safri karaa xero Tikniko 1084 ah oo wadar ahaan 8 kun oo 2 ayaa la geyn karaa taxane tareenada 168.
Nidaamka signalka ee tareenka ayaa la bixiyaa iyada oo la raacayo hawlgalka aan wali lahayn. Sidan oo kale, sida gaadiidka baabuurta habeenkii, adeegga dayactirka dayactirka, sida hawlaha, xarunta xakamaynta waxaa fulin kara shaqaale iyo darawal la'aan. Tani waxay ku siin doontaa dhaqaalaha ganacsiga iyo dabacsanaanta. Si kastaba ha noqotee, ganacsatada rakaabka, baabuurta waxaa loo isticmaali doonaa darawal, iyo sida M1, M2 iyo M3, hawlgalka wadista ayaa la sameyn doonaa.
Waxaa jira gangas dhexdhexaad ah inta u dhaxaysa gaadhiga. Tani waxay suurtogelin doontaa qaybinta qaybo ka mid ah rakaabka inay tareen ka kooban yihiin baabuurta 4. Dhammaan wiqiyadaha waxay leeyihiin kuleyl, qaboojin iyo hawo-qaadasho.
Badbaadada rakaabka, labadaba saldhigyada iyo gudaha iyo dibadda gaariga ayaa lala socon doonaa nidaamka kamaradaha wareegsan. Waxaa jira tilmaamo dijitaal ah oo tilmaamaya jihada gaadiidka dibedda ka baxsan, iyo "Map Dynamic Road Map" oo ku yaal albaabada baabuurka ee muujinaya saldhigga gaadiidka uu u socdo, saldhigyada ay ka baxeen, iyo macluumaadka internetka ee laga helo khadka. Intaa waxaa dheer, khariidadda wadada waxay tusi doontaa dhibcooyinka gudbinta nidaamyada kale ee gaadiidka. Gawaarid kasta wuxuu leeyahay tusmada macluumaadka rakaabka 8 (shaashadda LCD) si loogu wargeliyo rakaabka iyo in loo isticmaalo ujeedooyinka xayaysiinta. Isgaadhsi firfircoon ayaa la siin doonaa rakaabka iyo darawalka. Qalabka dabaysha iyo rinjiga codka iyo walxaha dabka dab demiska ayaa heli doona dadka reer Istanbul waxay awoodi karaan inay u safraan si raaxo leh.
Marka furay dalka Turkiga, kaas oo noqon doona line ugu dheer metro ee Kadikoy - Kartal Metro, wadarta kamaradaha 820 saldhigyada, escalators 238, 64 qaadaa heli karo. Awoodda gaadiidka rakaabka waa la kordhin doonaa marka Xarunta Ayrılıkçeşme ay ku jirto nidaamka xilliga deyrta ee 70.000 oo loo isticmaali doono xarun isdhexgal ah oo lala isticmaali doono khadka Marmaray ee Kadikoy - Kartal Metro kaas oo leh 2013 awood u qaadista rakaabka hal saac gudohood.
Tareenka Kadikoy-Kartal gaadhay dhamaadka
Ku dhowaad dhammaadka Doha Metro ee caasimadda Qatar
Rabshadaha Gaarka ah ee Amniga Gaarka ah ee Wadada Wadada Kadıköy Kartal
Kadikoy - Kartal bambo waday bam ku rakiban kamaradaha (Video)
Dhibaatada mootooyinka ee Kadikoy-Kartal: Muwaadiniinta ayaa ku dhexjiray IMM
Dibadbaxayaasha Kadikoy-Kartal ayaa bilowday
Ku dhowaad dhammaadka Sakarya New Bulvar Prjeosi
Mashiinka cuntada lagu iibsado
Mashruuca TCDD Ankara - Mashruuca Tareenka Xawaaladda Soomaliya Polatli - Afyonkarahisar waxay saxiixday qandaraas qandaraasle ah oo ku guulaysatay la-talinta kaabayaasha iyo kormeerka kormeerka